andLinux na ny fomba fampandehanana tsara ny rindranasa Linux amin'ny Windows | Avy amin'ny Linux
andLinux na ny fomba fampandehanana tsara ny rindranasa Linux amin'ny Windows
ary Linux Is a Rafitra Ubuntu izay mandeha amin'ny Windows (2000, XP, 2003, Vista, W7; ao amin'ireo kinova 32-bit), izay ampiasainy colinux, kinova amin'ny kernel Linux ho an'ny Windows. Raha ny filazan'ny mpamolavola ny tetikasa dia azo atao ny "mampiasa saika ny fampiharana" rehetra ho an'ny rafitra miorina amin'ny Linux ao amin'ny Windows noho ny "majika" an'ny andLinux. Amin'ny asanao dia tsy avelany hampiasa Linux ianao? Malahelo anao ve ilay rindranasa Linux tsara tarehy izay tsy misy amin'ny Windows? Ity misy safidy mahaliana tokony dinihina.
Na dia toa mitovy be aza io teknolojia io amin'ny fampandehanana Linux amin'ny Windows amin'ny alàlan'ny milina virtoaly, ny marina dia tsy mitovy izy io (vakio, tsara kokoa) satria mampifangaro tsara kokoa ireo rafitra roa fa tsy miasa misaraka amin'ny milina virtoaly. , izay mahatonga an'i Linux mihazakazaka haingana kokoa ihany koa ary ny Windows tsy mitadidy fahatsiarovana.
aryLinux dia mampiasa Xming ho mpizara azy ary PulseAudio ho mpizara audio azy.
Mametraka toy ny programa Windows hafa ihany izy io. Miseho ny interface installer ary tsindrio ny bokotra manaraka in-valo-polo tapitrisa. Mandritra ny fizotry ny fametrahana azy, hanontaniany anay ny fomba fampiasana andLinux: amin'ny alàlan'ny XFCEpanel, ny hitsin-dàlana avy amin'ny Windows, sns.
KDE: habaka kapila 4GB
XFCE: habaka disk 2GB
AndLinux fiasa lehibe
Rafitra miasa Linux miasa tanteraka (tsy misy birao, toa ny Windows manome iray)
Panel faharoa (eo ambonin'ny tontonana Windows) na menio fanombohana faharoa (ao amin'ny bara fampandrenesana rafitra eo akaikin'ny famantaranandro) izay ahafahana mihazakazaka ny rindranasa Linux anao
Azo atao ny mampiasa ny rindranasa Windows sy Linux amin'ny fotoana iray. Azo atao ny "manao kopia sy mametaka" eo amin'izy ireo
apt / Synaptic hametrahana fampiharana vaovao
Fuentes: ary Linux & WebUpd8
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » andLinux na ny fomba fampandehanana tsara ny rindranasa Linux amin'ny Windows
Faly be aho fa nanompo anao ny lahatsoratray! 🙂
Aza adino ny mandefa hevitra aminay ho an'ny paositra vaovao amin'ny mail anay na amin'ny alàlan'ny endrika fifandraisana !!!
elsant0 dia hoy izy:
Nampiasa Ubuntu Remix Portable tamin'ny solosaina maro aho ary namporisika olom-pantatra maro hanandrana ny Linux toy izao (nifindra monina tanteraka ny ankamaroany taoriana kelin'izay; D).
Heveriko fa ny tombony azon'ny AndLinux dia izy io maivana kokoa noho ny Ubuntu Remix Portable. Etsy ankilany, mamela ny fampiasana KDE fotsiny izy (ao amin'ny kinova ampidiriny ao anaty boaty) na XFACE (ao amin'ny kinova mitsingevana).
Valio amin'i elsant0
Che dia hoy izy:
Salama manao ahy ho toy ny linwin taona maro lasa izay tokony ho tamin'ny 11 hehehe, tonga ny fotoana tokony hitsanganako amin'ny maty.
miarahaba ny tarika afaka rehetra. Che
Mamaly an'i Che
Aguilar 09 dia hoy izy:
Valiny ho an'i Aguilar 09
Daty tsara Mety hitovy amin'ny cygwin ve izany? Nampiasa cygwin aho hananganana mpizara opensh amin'ny milina windows satria tsy misy kinova ho an'io rafitra miasa io.
Tsy dia izany. Ao amin'ny cygwin dia mila mamerina mandahatra ireo rindranasa rehetra ianao mba hahafahany mizotra tsara. Tsy izany no izy.
Juan Manuel Barra Valdebenito dia hoy izy:
Mampatsiahy ahy ny ubuntu azo entina izany, tsara fa misy ny solony
Valiny tamin'i Juan Manuel Barra Valdebenito
Dr.Z dia hoy izy:
Toy ny divay fa mihemotra! Hevitra tsara izany
Valiny amin'i Dr.Z
Zavatra toa izany ... eny ... 🙂
Mampandoa ny Douglas Pain dia hoy izy:
Fandaharana mahaliana na dia eo aza ny efijery… miaraka amin'ny AVG (!!!!)
Valiny ho an'i Lify Douglas Pain
Haha! Ary tsara… amin'ny milina Windows rehetra dia mila mametraka antivirus ianao. Ary ny tsara indrindra fantatro fa maimaim-poana dia AVG. 🙁
@llomellamomario dia hoy izy:
Niezaka izany aho ary na dia nisy aza ny olana dia vitako ny niasa. Fa ankehitriny rehefa miasa dia ny fahagagana fahavalo = P. Noho ny hatsaram-poko amin'ny lalao video izay mibodo ny ankamaroan'ny fotoanako amin'ny PC, mifamatotra amin'ny Windows aho (miandry an'i Valve handrehitra ny jiro ary hamoaka Steam amin'ny Linux) ary ny hery hampiarahana amin'ny iray hafa lehibe . Amarok indrindra, mpilalao mozika tiako indrindra (amin'ny Win ampiasaiko MediaMonkey) ary mety hahita fampiharana sy fampiasana maro hafa isan'andro aho. Marihina ihany koa fa ny hafainganana, na dia lehibe lavitra noho ny an'ny milina virtoaly aza, dia ambany kely kokoa noho ny an'ny rindrambaiko zanatany, saingy tsy dia mahatsiaro tena firy. Ary ny mahamenatra ihany koa dia ny tsy ahafahanao manolo ny mpitantana ny varavarankely Windows amin'ny iray amin'ny "lafiny maizina" satria mora tohina sy be menaka izy io, amin'izay hitako. Nefa mamporisika anao aho hanao izany. mpidoroka zava-mahadomelina miaraka amin'ny Windows ianao, toy ny amiko, dia manandrana azy ianao, azo antoka fa hahazo fahagagana mahafinaritra ianao = D
Mamaly an'i @llomellamomario
Tsy hiteny an'izany aho. Manome famakiam-boky hafa ny divay, izay manome ny fahombiazan'ny Windows mpiara-miasa aminy fahombiazana lehibe kokoa na kely kokoa, ary koa tontolo iainana tahaka ny Windows ka mahatsiaro ho "ao an-trano" ny apps, ary andLinux kosa dia manolotra anao ny herin'ny distro Linux feno, izay apetrany, afa-tsy ny mpitantana varavarankely izay efa entin'i Windows. Ary eny, ekeko, ny fahafahako mampiasa Amarok ... dia tsy voavidim-bola = D
vanesa vasquez dia hoy izy:
Salama xicos azafady mila fanampiana aho amin'ny famoronana programa roa ao amin'ny linux ilay voalohany izay manome grafika fampitahana na ny diplaoma voalohany, faharoa na fahatelo ary ny iray hafa hahitana raha capicua na polymeters ny teny na andianteny iray. fa q izy ireo dia miasa amin'ny fantsona roa, izany hoe amin'ny efijery roa ao anaty iray q dia aseho avokoa ny angon-drakitra fampidirana ary ny iray kosa ny angona famoahana. mba ampio aho azafady. Asa farany io. Raha afaka mandefa ny valiny amin'ity mailaka ity ianao: vanes_12_18@hotmail.com
Mamaly an'i vanesa vasquez